उप-कप्तान विक्रम लामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज | KhelkudNepal.com
नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमका उप-कप्तान तथा थ्री स्टार क्लबका कप्तान बिक्रम लामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।
दाहिने गोडामा चोट लागेपछि शल्यक्रिया र नियमित फिजियोथेरापी लगायतका उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएका उनी ९ दिनपछि डिस्चार्ज भएका हुन्।
धरानमा जारी बुढासुबा गोल्डकपको फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस विरुद्ध खेल्दा घाइते भएका लामालाई तत्काल ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा ल्याइएको थियो।
लामाको वरिष्ठ अर्पेथोडिक सर्जन तथा ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेको टिमले सफल शल्यक्रिया गरेको थियो।
हाल उनको घाउ निको हुँदै गएको र बैशाखीको सहायतामा हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले उनलाई आज डिस्चार्ज गरिएको डा. चक्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । लामा ६ देखि ८ महिनापछि खेल मैदानमा फर्कन सक्ने समेत डा. पाण्डेले बताए ।
6 thoughts on “उप-कप्तान विक्रम लामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज”
Pingback: bridal selfie frame
सुर्यनगर गोल्ड कप : नव युवाद्वारा त्रिवेणी संगम पेनाल्टीमा ४-२ ले पराजित
मनोज थापा : स्व. नर बहादुर गुरुङ ज्युको स्मृतिमा संचालन तेस्रो सुर्यनगर गोल्ड कप प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको खेलमा नव युवा क्लब विजय भएको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा नव युवा क्लबले त्रिवेणी संगम क्लबलाई खेल समयमा १-१ को बराबरी नतिजा आएपछि पेनाल्टी सुटआउटमा ४-२ ले पराजित गर्दै क्वाटर फाइनलको यात्रा […]
रम पम झापा गोल्डकप : आर्मी फाइनलमा प्रवेश ,उपाधिका लागि सोमबार आर्मी र झापा भिड्ने
महिला लिग च्याम्पियनसिप फुटबलमा सावित्रा भण्डारीको ९ गोल